Fibatana fonjamby - Afrika :: Manahy ny hitohizan’ny olana ara-bola ny Federasiona • AoRaha
Fibatana fonjamby – Afrika Manahy ny hitohizan’ny olana ara-bola ny Federasiona
Mizaka irery ny fandaniana rehetra amin’ny fikarakarana ny fiadiana ny ho tompondakan’i Afrika ny Federasiona malagasin’ny fibatana fonjamby. Mitaraina ny tsy fandrasain’ny minisiteran’ny Tanora sy ny fanatanjahantena (MJS) ny andraikiny izy ireo.
Efa nofoanan’ny Federasiona ny fiadiana ny ho tompondakan’i Afrika, sokajy zandriny, izay tokony hiaraka amin’ny sokajy “senior”, manomboka amin’ny zoma izao, eny amin’ny kianja mitafon’Ankorondrano.
“Hisy fiantraikany amin’ny fikatsahana ny tapakila amin’ny Lalao Olympika io olana io raha mitohy. Mitondra medaly volamena hatrany ny Federasiona isaky ny fifaninanana hika­tsahana izany. Ho very maina anefa ny ezaka raha sanatria ka mitohy ny olana ara-bola ka tsy afaka ny handray anjara amin’ireo lalao irasiam-pirenena hafa ny atleta malagasy”, araka ny fanazavan-dRakotoarison Thomas, tale teknikan’ny Federasiona malagasin’ny fibatana fonjamby.
Nohazavain-dRandriamanarivo Harinelina, filohan’ny Federasiona fa: “misy ampahany tokony haloan’ny Federasiona ary misy ny anjaran’ny minisitera. Hatreto anefa dia tsy nahazo an’izany fa­nampiana avy amin’ny MJS izany izahay ka tsy maintsy nidi-trosa”. Namaly izany kosa Ralaivao Lovatiako, sekretera jeneralin’ny MJS. “Efa lany tamin’ny Lalaon’ny Nosy sy Lalao Afrikana 2019 ny volan’ny minisitera tokony homena azy ireo. Miandry ny dinga­na rehetra tokony harahina vao hanome ny fanampiana hafa
indray ny minisitera”, hoy izy.
Baolina kitra – « Pro League » :: Ady laharana voalohany ny lalaon’ ny Cnaps Sport sy ny As Jet Mada